လူသားအားလုံးအတွက်: မင်းဒင်ရဲ့ သက်ခိုင်ရှာပုံတော်
Posted by မိုးယံ at 1:01 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ကောင်းတယ် ကောင်းတယ်. . .
မနေ့ကတည်းက ဖတ်လိုက်တယ်။ ကောင်းလို့ ဘာမှကို မပြောတော့တာ. . . ဂွတ်ထ. .
ငါလည်း ၀ယ်မယ်လုပ်နေတုန်း မန်းနီးပြတ်နေလို့း) ၀ယ်တာတော့ ၀ယ်ရမယ် ။
မနေ့ကတောင် ရတနာ ရာမကျောင်းကို သွားဝယ်မလို့။ တစ်နေကုန် မိုးရွာနေတော့ မိုးတိတ်တာစောင့်ရင်း ညရောက်သွားတယ်။ KLဇေယျာ မှာ ရတဲ့ အကြောင်း သတင်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဇေယျာက နည်းနည်း သွားရလာရ လွယ်တော့ ဇေယျာမှာဘဲ သွားဝယ်လိုက်မယ်။ :-)
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ ။ မသဉ္ဇာ ဒါပေမယ့် ဆိုင်ပေါ်တင်ထားတာဆိုတော့ အနည်းငယ်တော့ ဈေးပိုပေးရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်..
ဟုတ်ကဲ့။ ဒါပေမယ့် PJ အသွားအပြန်နဲ့ဆို စရိတ်က သိပ်မကွာလောက်ဘူး :D စနေနေ့ကတောင် ဇေယျာရောက်ဖြစ်သေးတယ်။ မမေးမိလိုက်ဘူး။ ဇေယျာမှ ကုန်သွားမှ ရတနာ ရာမ ကျောင်းကို သွားဝယ်ရမယ်။ (အဲကိုက မသွားတတ်လို့။)
နောက်ကြုံမှငှါးဖတ်မယ် မ၀ယ်နိုင်လို့ ..:P
မိုးရွှာထဲ ပြေးနေရလ်ို့ ... ဟိဟိ
ပီးတော့ ရွှာလည်နေသေး ...
နောက်တစ်ဆို လိုက်တော့ဝူး .....
ကြောက်ပါပြီဂျာ ....... ဟိဟိ
အပေါ်က တယောက်ယောက် ဖတ်ပြီး ရင် ဘာလီ ကို ပို့လိုက်။ လှမ်းဝယ် ခိုင်းတဲ့ သူက ၀ယ်ပြီး ဖတ်ပြီး သူများ တွေ ကို ပါဆင့်ကာ ဆင့်ကာ ထပ်ငှား နေတော့ ဘာလီ ကိုပို့တဲ့ အဆင့် ကို ရောက်ချင် မှတောင် ရောက်တော့မယ်။ :)